RW Cumar oo dhaawacyo ku booqday isbitaalka Erdogan ee Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Raysul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali ayaa maanta booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii 20-kii bishan lagu qaaaday Hotel Central, kuwaasoo ku jira Isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho.
Wuxuu xaqiijiyay inay qorsheynayaan labada maalin ee soo socota inay isbitaallo dalka dibaddiisa ku yaalla u qaadaan dadka qaba dhaawacyada culus.
Raysul wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay masuuliyiinta Isbitaalka, isagoo u kuur galay xaaladda caafimaad ee dadka dhaawac ah.
Wuxuu uga mahadceliyay maamulka Isbitaalka daryeelka ay u fidiyeen dhaawacyada ku jira Isbitaalka.
Madaxweynaha dowladda Isu-tagga Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ayaa isla maalinta uu dhacay qaraxa soo jeediyay in dadka ku dhaawacmay weerarka loo qaado dibadda, si ay u helaan daryeel caafimaad oo horumarsan.
Weerarka lagu qaaday Hotel-ka oo ay sheegatay Al-Shabaab, waxaa ku dhintay 25 qof oo ay ku jireen laba xildhibaan iyo ku-xigeenkii duqa magaalada Muqdisho, waxaana ku dhaawacmay reysal wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Cumar Carte, iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda.
Booqashada iyo kulankaasi kaddib ayaa waxaa Warbaahinta la hadlayey Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), waxaana uu sheegay in ujeedada booqashadan ay aheyd sidii loogu adeeggi lahaa Xaaladda guud ahaan dadkii ku soo waxyeelloobay Qaraxii Central Hotel ka dhacay Jimcihi la soo dhaafay.
Jimcihii lasoo dhaafay ayay aheyd madkii qaraxyo ka dhacay hotel Central ay ku dhinteen ilaa 25 ruux, halka tiro intaas ka badana ay ku dhaawacmeen.